युएसएहेलो कक्षा कोठाको बारेमा - कक्षा
युएसएहेलो कक्षा कोठाको बारेमा
युएसएहेल्लो कक्षाकोठामा स्वागत छ! USAHello निःशुल्क अनलाइन कक्षाहरू तपाईं सिक्न र संयुक्त राज्य अमेरिका सफल मदत गर्न प्रदान गर्दछ. तपाईंले भुक्तान गर्नुपर्दैन किनकि USAHello.org एक नाफा नकमाउने संस्था हो.
यस पृष्ठले तपाईको प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ यो कक्षा कोठा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे.
कक्षा कसरी काम गर्छन्?
हाम्रो कक्षा अनलाइन छन्, र तपाइँ कुनै पनि समयमा लिन सक्नुहुन्छ, कहीं. तपाईं एक स्कूल जाने छैन. बरु, घरमा वा तपाईँको फोन मा तपाईं सिक्न सक्छौं. तपाइँ रोक्नुहोस् र जब तपाइँ चाहानुहुन्छ सुरू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंले भुक्तान गर्नु पर्दैन, र तपाईंलाई कुनै पुस्तकको आवश्यक पर्दैन.
म कसरी कक्षामा भर्दछु?
मा जानुहोस् वर्गहरूको सूची. वर्ग द्वारा बटन क्लिक गर्नुहोस् वा अभ्यास छनौट गर्नुहोस् तपाईले रोज्नु भएको छ. तपाईको इ-मेल ठेगानाको साथ दर्ता गर्नुहोस् र पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्.
म कसरी मेरो कक्षा सुरू गर्छु?
तपाईंको कक्षाको लागि गृह पृष्ठमा जानुहोस्. तपाईं जान सक्नुहुन्छ GED® गृह पृष्ठ वा नागरिकता गृह पृष्ठ. वा तपाइँ अभ्यास अभ्यास छान्न सक्नुहुन्छ. गृह पृष्ठले तपाइँको पाठ्यक्रमको बारेमा बढि बताउँछ. पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सजिलो छ. जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ, हेर्नको लागि वा अध्ययन सुरू गर्न पाठ्यक्रममा क्लिक गर्नुहोस्.
पाठले कसरी काम गर्छ?
प्रत्येक पाठ अघिल्लो बाट पछ्याउने छ. पाठको अन्तमा एउटा क्विज हुन्छ ताकि तपाइँ तपाइँको बुझाइ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं जस्तै धेरै पल्ट पाठ पढ्न र रूपमा क्विजहरू लाग्न सक्छ.
के म मेरो भाषामा अध्ययन गर्न सक्छु??
हो. हाम्रो कक्षा धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ. तपाईं आफ्नो मातृभाषा र अंग्रेजीमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ. यसले तपाईंलाई अधिक सजीलो सिक्न र एकै समयमा तपाईंको अंग्रेजी सुधार गर्न मद्दत गर्दछ. कुनै पनि पृष्ठको शीर्षमा, थिच्नुस “तपाइँको भाषा छान्नुहोस्।” त्यसो भए मेनूबाट तपाईको भाषा छनौट गर्नुहोस्.
नोट: तपाईं आफ्नो भाषामा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले अंग्रेजीमा नागरिकता परीक्षा लिनु पर्छ. तपाईं GED लिन सक्नुहुन्छ®, HiSET, र TASC परीक्षण अंग्रेजी वा स्पेनिशमा. को GED® फ्रान्सेली भाषामा पनि टेस्ट प्रस्तुत गरिन्छ.
कक्षाहरू समाप्त गर्न कति समय लाग्छ??
यी पाठ्यक्रम काम मान्छे को लागि गरियो, आमाबाबुले, र व्यस्त जीवन अरूलाई. तिनीहरू कति लामो समय लाग्छ तपाईंको आफ्नै अवस्थामा निर्भर गर्दछ, शिक्षा, र भाषा कौशल. जो तपाईंको क्षमता, तपाईंले चाँडै वा बिस्तारै तपाईँले चयन रूपमा जान सक्नुहुन्छ. केही विद्यार्थीहरू धेरै द्रुत कक्षाहरू पूरा, एक दिन मा धेरै पाठ खत्म. अन्य विद्यार्थीहरूको समय लाग्न र धेरै महिना भन्दा बढी सिक्न.
कक्षाले तपाईंलाई प्रमाणपत्र दिदैन. पाठले तपाईंलाई तपाईंको नागरिकता वा जीईडी पास गर्न जान्नु आवश्यक पर्ने जानकारीहरू ढाक्छ®, TASC वा HiSET परीक्षण. तिनीहरूले तपाईंलाई परीक्षा दिन्छन् भनेर तयार गर्दछन् नागरिकता वा एक उच्च स्कूल डिप्लोमा. तपाईंको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न, तपाईं आफ्नो प्राकृतिकीकरण साक्षात्कारमा जानुहुन्छ. तपाईको हाईस्कूल डिप्लोमा प्राप्त गर्न, तपाईं एक परीक्षण केन्द्र जानेछ.
किन कक्षा कोठा नि: शुल्क छ?
सिक्नुहोस् हामी शरणार्थी र आप्रवासीहरूका लागि नि: शुल्क कक्षा किन प्रस्ताव गर्दछौं. हामी को हौं र USA मा नयाँ आगमनलाई मद्दत गर्ने हाम्रो लक्ष्य किन हो भनेर फेला पार्नुहोस्.
हामी यहाँ तपाईं सफल मद्दत गर्न तयार छौं!